खेलमा विशेष जाेड दिनु पर्छ : संसद शाह
/ २०७६, १७ फाल्गुन शनिबार १६:२३ प्रकाशीत
सुरेश पाण्डे १७ फागुन कपिलवस्तु जिल्लाकाे कृष्णनगर नगरपालिका मा १८ आैं इण्डाे नेपाल क्रिकेट टूर्नामेन्ट २०२० पुरस्कार वितरण तथा समापन कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बाेल्दै संसद शाह युवाहरुलाई अगाडि बढाउनकाे लागि टूर्नामेन्ट काे अायाेजना गरिएको छ । अाउने वाला दिनमा नेपाली युवाहरु काे भविष्य उज्ज्वल हुने छ। खेलकाे माध्यमबाट खेलाडी युवामा रहेको क्षमतालाई निकाल्नमा मद्दत गर्छ । नेपालमा खेलकाे नितिलाई राम्रो अगाडि बनाउनु खालकाे हुनुपर्छ । क्रिकेट खेल्ने मानिसलाई राेग नलाग्न मा यसले मद्दत गर्छ । यश काे माध्यमबाट समाजमा नाम र पैसा दुवै पाइन्छ । अाउने दिनमा राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट खेल्नकाे लागि यसैमा राम्रो खेलेका खेलाडीलाई विशेष मैका मिल्न सक्छ । भारत को गोण्डा र चितवन बीच पर्तिस्पर्धा रहेको थियो।
जसमा चितवनले ट्रस जितेर बैटिंग गर्न निर्णय लिएको थियो। जितवानले आफ्नो निर्धारित १६ ओवर २ बालमा ९८ रन बनाएर आल आउट भएको थियो र गोण्डालाई ९९ रनको लक्ष्य दिएको थियो। गाेण्डाले १६ अाेभर खेलेर र ३ विकेट गुमाएर फाइनल मैच जितेकाे थियो । नौनित चर्तुवेदीले २५ बाल खेलेर ३१ रन बनाएर आफ्नो टीम गोण्डालाई बिजय बनाउन मा सहयोग गरेका थिए । गोण्डाले १६ ओवरमा ३ विकेट गुमाएर नै फाइनल मैच हात परेको थियो। जसमा नौनित चर्तुवेदीले २५ बाल खेलेर ३१ रन बनाएर आफ्नो टीम गोण्डालाई बिजय हासिल गरिएको सहयोग गरेका थिए। खेल श्री राम गोरखा माध्यमिक विद्यालय बहादुरगंजको खेल मैदानमा भएको थियो । खेलाडीहरुलाई कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य संघ काे सभा हाल मा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अायाेजना गरिए थियो ।
बिजेतालाई रु १ लाख , कप र उपविजेतालाई रु ५० हजार , कप सबै खेलाड़ीहरुलाई मेडल प्रदान गरिएको थियो । मैचको मैन ऑफ दा सिरीज गोण्डा टिमको कप्तान चित्रांश प्राप्त गरेका थिए । साे कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य अभिषेक प्रताप शाह, टूर्नामेन्ट सर्वेक्षण कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाह ,विशिष्ट अतिथि डि. एस. पी सुशील साही , विशिष्ट अतिथि संजय गुप्ता वाड अध्यक्ष , अतिथि विनय शर्मा , अतिथि इनामु दिन हलवाइ , पत्रकार ,खेलाडी ,प्रहरी लगायत अन्य व्यक्तिहरुकाे उपस्थिति रहेको थियो ।